Semalt: iVital Elements ze-SEO Isicwangciso Okufuneka Ufunde
I-SEO yindlela yokwenza iinkqubo, iinkqubo kunye nezicwangciso ezisetyenziselwa ukwandisa inani leendwendwe kwi-site ngokufumana imeko ephakamileyo yokubeka indawo kwiphepha lezinto zewebhu ezibandakanya iBing, Yahoo, Google, enye iwebhu izixhobo zokukhangela. Ngokufanayo, kuyindlela ebalulekileyo yokuphucula umgangatho wewebhusayithi ngokubenza kube lula ukuyisebenzisa, ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyihlola.
I-SEO ibaluleke kakhulu kule mihla kunanoma yiphina ixesha, kwaye kubalulekile kwi-website nganye ye-intanethi ukuqonda ukubaluleka kokubaluleka kwewebhu kunye namathuba okudala kwishishini ngalinye. Izixhobo zokukhangela kwiWebhsayithi zinceda inani elikhulu labathengi imihla ngemihla efuna iimpendulo kwimibandela yabo.
uMax Bell, uMphathi wePhumela loMthengi we-12 (Semalt , unikezela kwinqaku isicwangciso esichukumisayo se-SEO ukuba uqale ulandele kwangoku.
Ukuphucula ukubonakala kwiiWebhu zophando zewebhu
Ngokubhekiselele kokukhankanywe ngentla, ithuluzi lokhangela lwewebhu lihlola ubungakanani bendawo yakho ngaphambi kokuba linike isikhundla kwiziko leziphumo zophando lwewebhu..Ukubaluleka ngakumbi kwesayithi lakho kunombuzo owenziwe, i-site ephakamileyo iya kuphakanyiswa.
Kuyinto eqhelekileyo kubasebenzisi bewebhu ukuba bangahambi ngeempahla zemibuzo, ngoko ke apho i-webhsayithi ibhanjelwe khona, ukubeka kakuhle kuyisisiseko sokukhokela ezinye iindwendwe kwiwebhusayithi. Ukubeka indawo engcono kunendawo, ukugqithisa ngakumbi ukuba umthengi uza kutyelela eso siza.
Ukuphuculwa kwewebhu kuqinisekisa ukuba iphepha lewebhu lifikeleleke ngumsebenzisi wewebhu kwaye lenze ngcono ukuba i-website iya kufumaneka kwisixhobo sokusesha kwiwebhu. Ukucwangciswa kwewebhusayithi ukuphucula ngokuqhelekileyo ilungiselelo lokucwangcisa umkhondo omhlophe owamkelekileyo kunye nabenzi bokuqukethwe bathatha emva kokufeza isikhundla esiphezulu kwimiphumo yokusesha yewebhu.
Ukuphuculwa kweKhangelo lokuKhangela ngeNqanaba (CTR)
I-CTR yinkalo yenani lokutshixa abathengi baphuma kwimiboniso yokukhushulwa, ebhekisela kubude bexesha lakho isibhengezo sibonakala. Ngethuba elihle lokuba isikhangiso sakho sinemifanekiso eninzi kodwa asikho ukuchofoza, imiphumo iya kuba yi-CTR ephantsi, leyo inxalenye enkulu inciphisa ukwanela kwesikhangiso sakho.
Ukuphuculwa kwewebhsayithi kuyenjalo ngokuchaphazela umphumo wakho wosesho lwewebhu osebenza kwimibandela yomthengi ukuze abantu abaninzi bakhuphe i-ad xa bephuma. Kule nkqubo, iziqulatho zomxholo kunye nolwazi lweemeta luphuculwe ukuqinisekisa ukuba idatha yakho ibandakanyeka malunga nokufumana i-CTR ephezulu.